SAWIRRO: Madaxweynaha Jubbaland oo Kismaayo dib ugu noqday, kana hadlay Fashilka Shirkii Garoowe
Kismaayo (Horumar Online) – Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo soo gaba gabeeyay Safarkii uu ku joogay Garowe ayaa maanta dib ugu soo laabtay Magaalada Kismaayo ee Caasimada KMG ah ee Jubbaland kadib shirkii madaxda Dowlada Federaalka ah iyo Dowlad Goboleedyada uga socday garowe.
Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in shirkii Garowe dirada lagu saarayay qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin Arimaha Siyaasada iyo sidii siyaasada wadanka salka loogu dhigi lahaa isla markana loo soo afjari lahaa kala fikir duwananta jirtay balse aysan madaxda Dowlada Federaalku arintaas diyaar u ahayn taasna ay sababtay in shirku uu Natiijo la’aan ku dhamaado.
Madaxweynahu wuxuu intaas ku daray in dib u eegista Dastuurka iyo qaabka loo wado oo aan ka turjumaynin maslaxada dalka ay qayb ka ahayd wada hadalada balse aysan dhicin in heshiis rasmi ah laga gaaro iyadoo madaxda Dowlada Federaalku ay ka cago jiidayeen waxaa uu sheegay Madaxweynahu in Dastuurka dib u habayntiisa ay tahay arin ka wada dhaxaysa Dowlada Federaalka ah iyo Dowlad Goboleedyada lakiin ay madaxda Federaalku u arkeen wax iyaga kaliyah ay ka go’aan gaari karaan.
Geesta kale, Mudane Axmed Maxamed Islaam, wuxuu xusay in aan hal maalin ah lagu daraynin doorashooyinka Federaalka iyo kuwa Dowlad Goboleedyada isla markana wararka been abuurka ah ee la xiriira in Jubbaland iyo Galmudug ay doonayaan wakhti kororsi ay yihiin kuwa aanay waxba ka jirin oo shacabka lagu marin habaabinayo.
Mudane Axmed Maxamed Islaam, wuxuu sheegay in shaqsiyaad Hoteelo Xamar ku yaala lagu biilo lagu dhiiri galinayo sidii xabad ay uga ridi lahayeen Jubbaland iyadoo looga gol leeyahay carqaladayda Doorashooyinka iyo Dowladnimada Jubbaland ee u baahan sii taaba galinta iyo in aan dib loo celin wuxuu sheegay in cid walba nabadgalyada ay masuuliyad ka saaran tahay.
Tags: #Fashilka #Garoowe #Madaxweynaha Jubbaland #Madoobe #Shirka
Previous Post In ka badan 30 kun Arday oo maanta u fariisaneysa Imtixaanka Shahaadiga ee Dugsiga sare
Next Post XOG XASAASI: Maxaad ka ogtahay Ujeedka uu M/weyne Xaaf u aaday Nairobi, kaddib Fashilkii Shirka Garowe